Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Dia mandroso Andro voalohany: Tena misy ny faharanitan-tsaina artifisialy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Dia mandroso Andro voalohany: Tena misy ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Ny AI ihany no miasa rehefa ny angon-drakitra, sy ny sehatra fampiantranoana azy, dia mety amin'ny tanjona hampiasana AI hananganana traikefa tsara kokoa ho an'ny mpandeha.
Nanomboka tamin'ny fivoriana natokana ho an'ny AI amin'ny dia ny andro fanokafana ny Travel Forward.
Misy ny fitaovana ho an'ny personalization faobe - fa mila miova ny toe-tsaina. Ny fizarana dia tsy fanasokajiana.
Raha mizara angona ianao, dia afaka miasa amin'ny loharanon-kevitra ny algorithm, mety ho lasa fiaraha-miasa, fiaraha-miasa.
Ireo mpanatanteraka teknolojia ambony manerana ny indostrian'ny dia dia mino izany intelligence aime (AI) dia handray anjara lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny dia raha mbola miova ny toe-tsaina sy ny fihetsika manoloana ny fifampizaràna angon-drakitra.
Ny andro fanokafana ny Travel Forward dia nanomboka tamin'ny fivoriana natokana ho an'ny AI amin'ny dia.
Andy Owen-Jones, Tale Jeneraly sady mpiara-manorina ny AI-early-adopter bd4travel, dia nilaza fa ny AI sy ny fianarana milina no hany fomba ahafahan'ny orinasam-pitaterana "manatsoaka hevitra" izay tadiavin'ny mpandeha.
Na izany aza, mba hihoatra ny "salan'isa" sy amin'ny "fanoloran-tena", AI mila fidirana amin'ny angona ny manam-pahaizana manokana
“Eo ny fitaovana ho an'ny personalization faobe - fa mila miova ny toe-tsaina. Ny fizarana dia tsy personalization. "
Sundar Narasimhan avy ao amin'ny Saber Labs dia nanamarika fa io fanavahana io dia hita taratra amin'ny fomba fampiharana ny orinasa AI ary ny fianarana milina amin'ny fitsangatsanganana dia novolavolaina sy namboarina ho fanatsarana ny traikefa ho an'ny mpandeha ary lavitra ny fanatsarana ny vokatra ho an'ny mpamatsy.
Izy koa dia nanohana toe-tsaina vaovao amin'ny resaka fizarana data.
"Raha mizara angona ianao, dia afaka miasa amin'ny loharanon-kevitra ny algorithm, mety ho lasa fiaraha-miasa, fiaraha-miasa." Nasongadiny tranga fampiasana ho avy izay ahafahan'ny AI manome traikefa fitsangatsanganana izay samy natao manokana ny sidina sy ny trano fonenana.
Ny saina, ny paradigma vaovao ary ny fisainana vaovao dia lohahevitra nandritra ny fotoam-pivoriana hafa koa. Jospeh Ling avy ao amin'ny Vouch dia nanazava ny fomba tokony hanovan'ny orinasany ny toe-tsain'ny indostrian'ny hotely.
“Tsy maintsy mandresy lahatra ny hotely izahay fa tsy mitovy ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny lafiny rehetra. Ny vokatray dia manampy ny hoteliers hanamboatra asa maro izay tsy ilaina ny fikasihan'olombelona, ​​izay manafaka ny mpiasan'ny hotely hifantoka amin'ny asa izay misy fiantraikany amin'ny traikefan'ny vahiny, "hoy izy.
Ny indostria iray hafa izay mila fanovana ny toe-tsaina dia ny fiaramanidina. Ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny tolakandro dia tsy nisalasala raha ny fijeriny fa ny fanatsarana ny fifampizaràna angon-drakitra eo amin'ny zotram-piaramanidina, ny mpandraharaha amin'ny seranam-piaramanidina ary ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka dia afaka manatsara ny fahaiza-manaon'ny fiaramanidina sy ny lalana, miaraka amin'ny tombontsoa avy hatrany amin'ny famoahana entona ambany kokoa amin'ny alàlan'ny fihenan'ny fandoroana solika.
Yann Cabaret avy ao amin'ny SITA dia nilaza tamin'ny efitrano feno hipoka fa "ny teknolojia maoderina dia manohana ny fiaraha-miasa - miaraka amin'ny angon-drakitra anananay dia afaka mampihatra ny fianarana milina izahay mba hanamafisana ny fihetsiky ny fiaramanidina, eny amin'ny lanitra na ny seranam-piaramanidina."
Na izany aza, ny fiheverana ara-barotra dia manakana ireo mpandraharaha tsy miankina maro mifampizara angon-drakitra, toe-javatra tsy mifanaraka amin'ny ady amin'ny vonjy maika amin'ny toetr'andro. "Ny ezaka indostrialy dia afaka miasa raha tsy misy ny rehetra," hoy izy.
Ny habetsaky ny angon-drakitra voarafitra sy tsy voarafitra ao anatin'ny indostrian'ny dia dia mamorona tontolo tonga lafatra ho an'ny faharanitan-tsaina artifisialy hamokatra vokatra vaovao, traikefa tsara kokoa ho an'ny mpandeha ary fidiram-bola bebe kokoa ho an'ny orinasa fitsangatsanganana. Na izany aza, ny vokatr'izany dia ny habetsaky ny angon-drakitra dia midika fa ny orinasa dia tokony hieritreritra ny hanamarina ny angon-drakitra alohan'ny hampiasana azy.
Manual Hilty avy amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny teknolojia momba ny fitsangatsanganana isan'andro Nezasa dia nilaza fa ny orinasany dia namolavola ny sehatra mba hahafahany manohana ny famakafakana angon-drakitra sy ny AI amin'ny ambaratonga ary hampihatra ny fomba fijery amin'ny sehatra manokana.
"Ny fandrindrana, ny famandrihana ary ny fanatanterahana fitsangatsanganana mandritra ny andro maromaro dia manana teboka maro, izay samy manana ny fahasarotany manokana," hoy izy. "Fantatsika fa ny AI ihany no miasa rehefa ny angon-drakitra, sy ny sehatra fampiantranoana azy, dia mety amin'ny tanjona hampiasana AI hananganana traikefa tsara kokoa ho an'ny mpandeha".